Toeran’i Madagasikara aty Afrika : tsy ampy sy tsy hita ny fitrandrahana ny voka-pikarohana | NewsMada
Toeran’i Madagasikara aty Afrika : tsy ampy sy tsy hita ny fitrandrahana ny voka-pikarohana
Par Taratra sur 16/05/2018
« Ny fivoaran’ny fikarohana momba ny siansa, moa ve isika mizotra amin’ny lalana marina ? ». Tara-kevitra iray novoaboasan’ny Pr Ratsimbazafy Jonah tao amin’ny Akademia malagasy io, ny 14 mey. Nentiny nanazava izany ny toeran’i Madagasikara eo anivon’ny African Academy of Sciences (AAS).
Mifandray amin’ny African Academy of Sciences na ny AAS ny Akademia malagasy, izay 115 taona ankehitriny. Matoa ny vazaha nametraka ny Akademia malagasy tany amin’ny taona 1903, tsy takona afenina ny harena misy eto amin’ny tanindrazantsika. Manankarena i Madagasikara, saingy voasokajy ho anisan’ny firenena mahantra indrindra maneran-tany. Tsy ampy ny voka-pikarohana ary na misy aza, tsy hita ny fitrandrahana izany, ohatra, ny amin’ny tokony ho fanatsarana ny voly vary.
Mijery paikady ho an’ny fampandrosoana ny AAS, manolo-kevitra ny governemanta, hitrandrahana ny vitan’ireo mpikaroka. Afaka mamatsy fandaharanasa momba ny fikarohana, manome vatsim-pianarana, sns. Raha fehezina, tombontsoa ho an’ny tany mpikambana ao aminy ny AAS. “Zava-dehibe anefa ny fanaovana asa fikarohana, indrindra ny fizarana izany. Miainga avy amin’izay ny ahitan’ny hafa ny voka-pikarohana, sy handrefesena ny zava-bita”, hoy ny Pr Ratsimbazafy Jonah.
Mpikaroka malagasy roa monja …
Koa aiza ho aiza ny toeran’i Madagasikara aty Afrika eo amin’ny fikarohana ? Singa iray handrefesana izany aloha, tsy misy afa-tsy mpikaroka malagasy roa monja ny ao amin’ny AAS amina mpikambana 361. Ireo mpikaroka ireo : ny Pr Raoelina Andriambololona sy ny Pr Ratsimbazafy Jonah. I Nizeria anefa manana 63, i Afrika Atsimo 42… Tsy misy karama raisina ny ao amin’ny AAS fa tena miasa ho fampandrosoana marina ny tanindrazana. Singa iray faharoa ny laharan’ny oniversite (fanjakana) eto Madagasikara, anisan’ny gisitra aty Afrika eo amin’ny asa fikarohana.
Singa iray hafa ny “H index” fandrefesana ny zava-bitan’ny mpikaroka iray. Ny hitsarana azy ny fitambaran’ny voka-pikarohana efa navoakany sy ny olona namaky sy nampiasa izany. Ny an’ny Pr Ratsimbazafy Jonah, ohatra, 19 ny azy ny “H index”; ny an’ny mpikaroka amerikanina iray nampianatra azy, 42. Mbola vitsy amin’ny mpikaroka malagasy ny mahazo “H index” 10. Malaina mamoaka ny voka-pikarohany ny Malagasy na anarany fotsiny ny hoe “mpikaroka”, na tsy manam-potoana hanaovana izany asa izany noho ny antony maro, anisan’izany ny politika maloto eto amin’ny firenena.
Zara raha misy tetibola
Olana iray lehibe navoitran’ny Pr Ratsimbazafy Jonah ny nilazany fa zara raha misy tetibola ho an’ny asa fikarohana eto amintsika. Tsy hita taratra anatin’ny tetibolam-panjakana izany. Laharana faha-83 amina firenena 100 aty Afrika ny oniversite eto Madagasikara, mbola aorian’i Somalia, laharana faha-55. Maro ireo tolokevitra naroson’ny mpandahateny ho fanarenana ny onivesrite eto an-toerana, toy ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa sy fanatsarana ny rafitra. “Raha mandeha amin’ny tokony ho izy tokoa ny voka-pikarohana manonofy aho ve raha afaka 10 taona, ho lasa mpanondrana vary i Madagasikara, hiverina ny 50 % amin’ny ala, hahazo loka Nobel isika, sns …”, hoy ny Pr Ratsimbazafy Jonah.